Shiinaha Carbon fiber laba-waddo isku xira soosaarka tuubada iyo Warshad | Yan Tuo
Dhamaanteen waan ognahay inaysan macquul aheyn in lagu wareejiyo tuubada kaarboonka fiber-ka farsamada wax soo saarka dhaqameed, maxaa yeelay waxay dhaawaceysaa qaab dhismeedka kaarboonka. Marka labada daraf waxaa lagu beddelay qaybo aluminium ah. Ama isticmaal cusbada iyo xabagta si aad ugu xirto qaybaha fiber fiber-ka la warshadeeyay tubbada asalka ah ee kaarboonka.
3K Glossy / Matte / sida Loo Baahan Yahay
Sanduuqa Warqadda, Xumbada, Bacda Cadaadiska Sare
500mm * 58mm * 78mm Sida loo baahdo
5000 Gabal bishii
Fiber Kaarboon-ku-saleysan Polyacrylonitrile
Faa'iidada ugu weyn ee sheyga
Dhamaanteen waan ognahay inaysan macquul aheyn in lagu wareejiyo tuubada kaarboonka fiber-ka farsamada wax soo saarka dhaqameed, maxaa yeelay waxay dhaawaceysaa qaab dhismeedka kaarboonka. Marka labada daraf waxaa lagu beddelay qaybo aluminium ah. Ama isticmaal cusbada iyo xabagta si aad ugu xirto qaybaha fiber fiber-ka la warshadeeyay tubbada asalka ah ee kaarboonka. Haddii aad sidaas sameysid waxay si weyn u lumin doontaa waxqabadka tuubbada kaarboonka lafteeda lafteeda, adkaanteeda iyo adkeysigeedana si weyn ayaa loo yareyn doonaa. Si loo xalliyo dhibaatadan, waxaan isku dayeynaa inaan adeegsanno habab farsameyn si aan u abuurnno isku xira fiber kaarboon dhammaystiran. Tijaabooyin badan ka dib, waxaan ugu dambeyntii helnay qaab wax soo saar xasiloon. Ugu dambeyntiina waxaan ogaanay isdhexgalka dhuumaha isku xira fiilooyinka. Waxyaabaha jirka iyo kiimikada ee tuubooyinka si weyn ayaa loo hagaajiyay
Deegaanka alaabta lagu dabaqi karo
1.Ku xirida qaybaha qalabka waaweyn
2.Two-way isku xira tuuboyinka dhuumaha gaadiidka
Qalabka 3.Military, qalabka caafimaadka, qeybaha qalabka aerospace
1. Awood xoog leh oo xoog leh: Awoodda kaarboon kaarboonka waa 8-10 jeer oo bir ah, oo inta badan ka sarreeya 3500mpa, waxqabadka fiicana wuxuu gaari karaa 5000mpa.
2. Cufnaanta hoose iyo miisaanka fudud, cufnaanta ayaa ah kaliya 1/4 bir ah.
Tuuboyinka kaarboon kaarboon waxay leedahay faa iidooyinka xoogga sare, nolosha dheer, caabbinta daxalka iyo miisaanka fudud. Waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa alaabada sida qaniinyada, diyaaradaha duulimaadyada, duulimaadyo kala duwan, qalab fallaadhiyo, qalab otomaatig ah, mashiinno qotodheer, fidiyayaal caafimaad, qalab isboorti iyo wixii la mid ah. Taxane ah sifooyin heer sare ah sida xasilloonida cabbirka, qabashada korantada, kala-baxa kuleylka, is-dhexgalka ballaarinta kuleylka oo hooseeya, is-saliideyn, nuugista tamarta iyo iska caabinta shoogga. Oo wuxuu leeyahay astaamaha modulus gaar ah oo sarreeya, iska caabbinta daalka, caabbinta qulqulka, iska caabbinta heerkulka sare, xirashada caabbinta iyo wixii la mid ah.
Hore: 3K PlainTwill waxay jareysaa Xaashida Kaarboonka Fiber
Xiga: Tuubada Fiberglass-ka